Free service online. Ngesikhathi kuvubukulwa, earthworks
Ukubalwa yokugujwa earthwork for
B - yokugujwa ukujula
Y - ubude emgodini
X - ububanzi emgodini
Construction earthworks - Omba umgodi isisekelo, yokubhukuda noma echibini, umsele i ezimele indlu ezweni amapayipi, amanzi uhlelo noma amanzi cottage.
In ukuhlela kumbiwa kubalulekile kakhulu ukuhlola kumbiwe ivolumu.
Izindleko yokugujwa siqukethe nokumbiwa emseleni noma nokumbiwa kanye nokususwa inhlabathi. Kuyadingeka ukuhlela ukuhamba kwenhlabathi ungqimba lomhlaba ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo ensimini noma engadini. Okungavundile of the Inhlabathi esetshenziswa yokululama site, impendulo okokulala isisekelo noma zithathwa off-site. Izindawo for ukususwa inhlabathi kunqunywa kusengaphambili.
Futhi wazi ukuthi amanani for 1 imitha cubic of umgodi ngokuvamile kwandisa kanye yomsebenzi ukujula. Kusukela intengo ebusweni kuya 1 imitha 1 imitha ejulile ukujula ingahluka ngisho kabili. Moving inhlabathi ngokuvamile into ehlukile izindleko. Ukuze bazilethele izindleko esingalindelekile Ibeke konke kusengaphambili inkontileka.
Cabanga stock in inani umgodi for formwork lapho ethela isisekelo.
Manual noma backhoe?
Ngayinye yalezi zindlela babe izinzuzo zabo kanye nebubi.
Uma usebenza ngesandla pit ingenziwa ngokunembile.
With zamanani aphansi zabasebenzi, kanye nengcosana ye izindleko yokugcina zokukhiqiza ngesandla umgodi kungenzeka esingaphansi lapho liqashe i excavator kanye nezinye imishini. Lula lelisu control ubukhulu kanye geometry emgodini.
Nokho, imali abalulekile inhlabathi nesivinini backhoe ngokuvamile iwina. Kunoma ikuphi, isinqumo kukuwe.
Inqubo ye earthworks.
Okokuqala okudingeka ukumaka endaweni esemgodini noma emseleni. Ukuze wenze lokhu nezikhonkwane phansi futhi intambo mncane akhombise endaweni yomsebenzi. Ukuze ulawule izibalo zama-engela of the kulinganiswa ezimbili diagonals ikusasa emgodini - kumele ahambisane.
Nokho, lokhu kuyinto indlela engafanele futhi kufanelekile wokubeka uphawu imisele noma ezweni owendlalekile.
Ukuze ngokunembe kakhudlwana design earthworks on the ubuchwepheshe elandelayo.
At ukuqhela emgodini okuhloswe wemba izikhala wokhuni, ngamaqembu amabili (castoffs). Bathi Bopha ibhodi ukuyaphezulu, lapho ukudonsa izintambo. Amabhodi zama ukulungisa ngesinye ezingeni kanye nomunye.
By ezihambayo izintambo, kuzuzwe ngqo wokugubha. Lezi inkatho-offs in the ukusetshenziswa esizayo eqondile strip isisekelo formwork.
It kusiza Lizinga lekusebenta, theodolite, tape laser ngesilinganiso noma laser level.
With a field ezibuthakathaka noma ukugubha ukujula okukhulu unake ekhethekile ukuphepha earthworks. Kulokhu, udonga emgodini do not ngokuqinile mpo, kodwa nge nokuchema - ukuvimbela ukuchitheka kwenhlabathi.
Izindonga kanye phansi control emgodini ezingeni futhi wesitimela eside ngokwanele.
Ukuze engela olunembile degrees 90 kukhona oyedwa reception. Unxantathu emaceleni 3:4:5 m (noma emaceleni ukuthi kukhona isibuyabuyelelo se lezi zibalo) It has a angle-degree 90. Lay ngakolunye uhlangothi le engela 3 metres, ngakolunye - 4 kanye nebanga phakathi amaphuzu kumele ncamashi 5 amamitha.